तपाईंको मार्केटिंग क्यारियरमा मार्केटिंग स्वचालनको प्रभाव - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक अप्रिल 7, 2021 अप्रिल 6, 2021 शेन बार्कर B2B, व्यापार, सम्पादकको पिक, ग्लोबल थोक अनलाइन, समाचार लेख, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, प्रविधि, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
डाटा चालित प्लेटफार्मों अधिकतम सगाई को लागी सामग्री पोष्ट गर्न को लागी राम्रो समय र प्लेटफार्म को पूर्वानुमान गर्न सक्दछ।
बजारहरूले प्राय: क्रस-फंक्शनल टीमहरू फ्याँक्ने बिक्री, उत्पादन विकास, र ग्राहक सेवा ह्यान्डल गर्न आवश्यक पर्दछ।
राम्रो समाचार यो हो कि कम्पनीहरूसँग उच्च-भुक्तान गरिएको मार्केटरहरू समायोजन गर्न कोष छ जुन उनीहरूको मार्केटिंग खेल गर्न सक्छन्।
मार्केटो मार्फत छवि।
त्यहाँ एउटा क्याच छ?
त्यहाँ पक्का छ। मार्केटिंग अटोमेसनले मार्केटरहरूको लागि समस्या खडा गर्न सक्छ।
तिनीहरू जो मार्केटिंग संग आफूलाई हात छैन स्वचालन आवश्यक आफूलाई बेमानी भेट्न सक्छ। ती मेशिन-निर्भर ईकोसिस्टममा पुरानो हुन सक्छ। साथै, कौशल वृद्धि एक समय कार्य होइन; यो चलिरहेको हुनु आवश्यक छ जब प्रविधिको बिजुलीको वेगमा विकसित हुँदैछ। 56% मार्केटरहरूको गतिशील MarTech उद्योग द्वारा आउटस्पेस महसुस।
उही समयमा, स्वचालन कौशलका साथ व्यक्तिहरूले नयाँ फेला पार्न सक्दछन् क्यारियरका अवसरहरू, उच्च तलब, सुधारिएको उत्पादकता, र अधिक काम सन्तुष्टि।
मेरो विचारमा पेशेवरहरू दुर्गुणहरू भन्दा धेरै टाढा छन्। विश्वस्त छैन? त्यसो भए, कसरी मार्केटिंग स्वचालनले तपाईंको मार्केटिंग भूमिकालाई पूरक बनाउन र तपाईंको व्यावसायिक क्यारियर विस्तार गर्न सक्दछ भनेर जान्नको लागि पढ्नुहोस्।
कसरी मार्केटिंग स्वचालनले मार्केटर्सलाई फाइदा पुर्‍याउँछ?
जबकि यो सत्य हो कि अटोमेसन सबै जम्मा भएको छ व्यापार को पक्ष र मार्केटि,, त्यो पक्कै पनि खराब चीज नै छैन। वास्तवमा तपाईले त्यो काम तपाईको पक्षमा गर्न सक्नुहुन्छ।
कसरी? मार्केटिंग अटोमेसनका अनगिन्ती फाइदाहरू बुझेर र तिनीहरूलाई तपाईंको फाइदाको लागि चलाउँदै। एकचोटी हेर्नु।
१. यसले तपाईंको मार्केटिंग / बिक्री आरओआईलाई गुणा गर्दछ
प्रतिस्पर्धाले ग्रस्त वातावरणमा, मार्केटरहरू आफ्ना कौशलताको आधारमा लिड्स र रूपान्तरणहरू उत्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण छ।
त्यहीं स्वचालितले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ। ईकॉमर्स अपसेलि cross र क्रस-बिक्री अधिक परिणामकारी छन् एआई-संचालित उपकरणहरू। तिनीहरूले लुकेका उपभोक्ता लक्षण र बान्कीहरू लिन्छन् र उच्च-सम्भावित सीसा पहिचान गर्छन्। यी अन्तर्दृष्टि प्रयोग गरेर, तपाईं अधिक स्पष्ट रूपमा लक्षित गर्न सक्नुहुन्छ र मार्केटिंगबाट निश्चित ROI निकाल्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ तपाइँको ब्रान्डको अनलाइन उपस्थिति बढाउन सामग्री मार्केटिंगमा भर पर्नुभयो भने, उपकरणहरूले मद्दत गर्न सक्छन्। डाटा चालित प्लेटफार्मों अधिकतम सगाई को लागी सामग्री पोष्ट गर्न को लागी राम्रो समय र प्लेटफार्म को पूर्वानुमान गर्न सक्दछ। जब तपाईंको सामग्री सही समयमा धनी मानिसहरूमा पुग्छ, तपाईंको सामग्री मार्केटिंग आरओआई स्वचालित रूपमा बढ्छ।
आज सोशल मिडिया मार्फत छवि।
नेतृत्व उत्पादन अर्को क्षेत्र हो जहाँ स्वचालनले आश्चर्यकर्म गर्न सक्दछ। अनुसन्धानले यो प्रमाणित गर्दछ पाँच मा चार सीसा पहिचान गर्न र पालनपोषण गर्न उपकरणहरू प्रयोग गर्ने मार्केटरहरूले बढेको सीसा खण्डहरू देख्छन्।
तपाईको लागि त्यो के मतलब हो?
टेक्नोलोजी डराउनुको सट्टा यसलाई अrace्गालो। दोहोरिने सम्बन्धी वा सांसारिक गतिविधिहरू स्वचालित कार्यले तपाईंको कामबाट तनाव लिन सक्दछ। तपाईं लिंक्डइन अटोमेसन उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको भाँडा प्रक्रियाको लागि भावी उम्मेद्वारहरूको राम्रो डाटाबेस उत्पन्न गर्न। साथै, तपाईं आफ्नो उत्पादकता सुधार गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको मार्केटिंग लक्ष्यहरू द्रुत रूपमा पूरा गर्न सक्नुहुन्छ।
संचार मार्केटिंगको जीवनरक्त हो।
के तपाईं अझै पनि फोन जस्तै पारंपरिक आउटरीच विधिमा ह्या ?्ग अप गर्दै हुनुहुन्छ? तिनीहरू एक बहु-संवेदी अनुभव प्रदान गर्न असफल हुन्छ जुन आधुनिक उपभोक्ताहरूले चाहान्छन् र ब्रान्डबाट अपेक्षा गर्छन्।
स्वचालन प्रविष्ट गर्नुहोस्। जूम जस्ता भिडियो कन्फरेन्सिंग उपकरणहरूले एक-देखि-धेरै र धेरै-धेरै धेरै संवादहरू सक्षम गर्दछ जुन तपाईंले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ उत्पादन सुरूवात र घटनाहरू। तपाइँ स्क्रिन-साझा गर्न, भिडियो साझेदारी गर्न, र तपाइँको दर्शकहरूलाई व्यस्त राख्न गतिविधिहरू आचरण गर्न सक्नुहुन्छ। स्वाभाविक रूपमा, संचार परिणाम धेरै राम्रो छ।
यदि तपाइँ उपकरणहरू बिना ईमेल मार्केटिंग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ केवल तपाइँको समय बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ। तपाइँ कसरी थाहा पाउनुहुन्छ यदि तपाइँका सन्देशहरू डेलिभर गरियो, खोलियो, र यसमा कार्य गरियो भने? उपकरण प्रयोग गरेर, अवश्य।
तपाईंले घटनाहरू ट्रिगर गरिएको वर्कफ्लोहरू सिर्जना गर्न उपकरणहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ, भरपर्दो वितरण र स delivery्लग्नता ट्र्याकिंगको साथ। साइटमा च्याट बबटहरू तपाईंको वेबसाइट आगंतुकहरूको सेवा गर्दछ २× ×।। निजीकृत मेसेजिंग र सुपर-कुशल ह्यान्डलिंगको साथ, उनीहरूले सुनिश्चित गर्दछ कि कुनै आगंतुकले तपाईंको साइट असन्तुष्ट छोड्दैनन्।
It. यसले टीम सहयोग र सञ्चारको सुविधा पुर्‍याउँछ
बजारहरूले प्राय: क्रस-फंक्शनल टीमहरू फ्याँक्ने बिक्री, उत्पादन विकास, र ग्राहक सेवा ह्यान्डल गर्न आवश्यक पर्दछ। जटिल, चार्ज अप अभियानहरू रोल आउट गर्न, निर्बाध सञ्चार र सहयोग आवश्यक छ।
त्यहाँ स्वचालनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
टोली ब्यबश्थापन उपकरणहरू जस्तै स्ल्याक र ट्रेलो छरिएका टिमहरू जडानमा मद्दत गर्दछ। घर्षण रहित उत्पादन विकास सफ्टवेयरको लागि जस्तै एयरफोकस उपयोगी हुन सक्छ। तेस्रो-पार्टी उपकरणहरूसँग गहन एकीकरणले अन्त-देखि-अन्त सहयोगलाई अनुमति दिन्छ।
समान पृष्ठमा तपाइँको सबै टोलीहरूसँग, काम सजिलो र रमाईलो हुन्छ।
It. यसले तपाईंको स्किल सेट र क्यारियर ग्राफ बढाउँदछ
मार्टेक छिटो विकसित हुँदै गएको र प्रतिस्पर्धा कडा हुँदै जान थालेपछि टेक-सेभवी मार्केटरहरूको बढ्दो माग छ।
प्रमाण चाहिन्छ? 48.1% उद्यमीहरु को लागी उनीहरु अत्याधुनिक प्रविधिको फाइदा लिन सक्दैनन् किनभने उनीहरुको टोलीसँग आवश्यक सीप छैन।
यदि तपाईं आफ्नो रिजुमेमा स्वचालन कौशल जोड्नुहुन्छ भने, तपाईं यो खाली गर्न सक्नुहुन्छ र मूल्यवान कर्मचारी बन्न सक्नुहुन्छ। यसका साथै, तपाईं वृद्धि / पदोन्नतीहरू र वरिष्ठ-स्तर रोजगारहरूको लागि योग्य बन्नुहुन्छ।
राम्रो समाचार यो हो कि कम्पनीहरूसँग उच्च-भुक्तान गरिएको मार्केटरहरू समायोजन गर्न कोष छ जुन उनीहरूले गर्न सक्दछन् बजार योजना। बढेको मार्केटिंग बजेटले यो सम्भव बनाएको छ। यसबाहेक, जब व्यवसायहरूले परम्परागत श्रम-गहन प्रणालीहरूलाई स्वचालित गर्छन्, अनुभवी कर्मचारीहरू माइग्रेसन र उपस्किल ह्याण्डल गर्ने टीमहरूको निरीक्षण गर्न आवश्यक हुनेछ।
के मार्केटरहरूले मार्केटिंग अटोमेसनसँग डराउनु पर्छ?
यो त्यस्तो छैन जस्तो कि मार्केटिंग स्वचालन गुलाबको ओछ्यान हो। त्यहाँ धेरै मार्केटिंग भूमिकाहरू छन् जुन काट्ने ब्लकमा अवतरण गर्न सक्छ।
एआई च्याटबट्स, मेकेनाइज्ड आउटरीच, र सेल्फ-सर्भिंग प्लेटफार्मको आगमनको साथ, ग्राहक सेवा र बिक्री कार्यहरू घट्न सक्दछन्। सबै पछि, स्वचालित प्रणालीले अधिक कार्यभार ह्यान्डल गर्न सक्छन्, लागत प्रभावी छन्, र डाउनटाइम आवश्यक पर्दैन।
थप रूपमा, मार्केटिंग विश्लेषकहरू र अन्वेषकहरूले कुञ्जीको रूपमा कुञ्जीहरू पाउन सक्छन् जसरी मिसिन नम्बर क्रunch्क छिटो हुन्छन् र कम त्रुटिहरू गर्छन्। तिनीहरू आफ्नो कार्यहरू सुरक्षित गर्न सक्दछन् मेशिन लर्निंग र उनीहरूका रेजुमेहरूमा ठूलो डाटा।
कुलमा, हार्ड-कोर मार्केटरहरूको आवश्यकता जारी रहनेछ, विशेष गरी यदि तिनीहरूले स्वचालनलाई अँगाले। मार्केटिंगलाई अझै मानव स्पर्श चाहिन्छ, जुन मेशिनहरूले अनुकरण गर्न सक्दैन।
म्यान-बनाम-मेसिन अवस्थामा तपाईंको के लिन्छ? तलका टिप्पणीहरूमा तपाईंको राय साझा गर्नुहोस्। नयाँ परिप्रेक्ष्य पढ्न म सँधै खुशी छु।
सांप्रदायिक समाचार मार्केटिंग स्वचालन बजार क्यारियर